Waaheen Media Group » Hayb-sooca aan weli Xal loo helin
Browse:Home Articles Hayb-sooca aan weli Xal loo helin
Published by Waaheen Media on May 2, 2017 | Comments Off on Hayb-sooca aan weli Xal loo helin
Bulshada laga tirada badanyahay waxay dhibaatooyinka kala duwan kala kulmaan
qaybaha kala duwan ee bulshada soomaalida, waxaana inta badan ay la kulmaan
takoorrid iyo cadaadis gaar ahaan dhinaca shaqaalaysiinta iyo weliba guurka.
Bulshadan oo iyagu intooda badan u muuqda kuwo niyad jabsan ayaa waxa ay inta
badan cabasho xooggan ka muujiyaan takoorka lagula kaco iyo weliba dhibaatooyinka
ay ku hayaan bulshwaynta kale ee ay la noolyihiin.
Maxamed Axmed Yaasiin oo ah arday jaamacadeed isla markaana kamid ah dadkaasi
ayaa waxa uu sheegay in dhibaatooyinka ugu waawayn ee uu la kulmaa ay kamid
tahay in marka la ogaado qabiilkiisa lagu cunsuriyadeeyo isla markaana loola dhaqmo
qaab aan wanaagsanayn.
Maxamed Waxaa uu intaasi ku daray in marka laga soo tago goobaha waxbarashada
sidoo kale bulshadan laga tirade badanyahay ay cadaadis kala kulmaan dhinaca awood
qaybsiga siyaasadda, iyagoo saami hoose ka hela dowladda waxaana madaxda
dhaqankoodu inta badan ka cabataa saamigaas hoose ee ay ka helaan dowladda,
“Sidaa darteed, waxaan u soo jeedinaynaa xukumada ,golayaasha sharci-dejinta iyo
xisbiyada qaranka ee dalka in ay u arkaan in ay lagama maarmaan tahay in dadka la
hayb-sooco ay ku jiraan talada dalka oo u oggolaadaan codad iyagu ka tirsan oo qeexa
arrimaha iyaga gaarka u ah, xalna loogu helo, taasoo noqonaysa dimuqraadiyadda
wada-tashiga ku dhisan ee laga wada qaybqaadanayo.”
Magaalada Hargeysa oo bulshadani ay intooda badan ku nool yihiin ayaa waxa ay
kaga nool yihiin magaalada xaafadda ugu liidata dhinaca dhaqaalaha iyo
nadaafaddaba, waxaana inta badan xaafaddaasi ka maqan kaabayaasha dhaqaalaha iyo
dhammaan adeegyada aas-aasiga ah. “ma helno Xanaano, Iskuul iyo Goob Caafimaad
oo Deg deg ah hadii ay timaado masiibo ilaahay naguma keenee halkii si deg deg ah
loogula Tacaali lahaa Xaalada Caafimaad ee Bulshadaasi, Caruurtayadu inta Badan
ma hesho Wax badasho, marka laga reebo boqolkiiba hal 1% wax ka dhigta Dugsiyo
aad u fog fog oo ku yaal Xaafadaha ay ku nool yihiin Bulshda intaada kale ee tirade
Badani, Sidoo kale Hooyada Foolataa ma hesho daryeel Caafimaad mararka qaar
waxaa dhacda inay Hooyadu Umul aroorto ka dib markii laga gaadhsiin waayo
Googta Caafimaad ee noogu dhaw oo sidoo kale la mid ah.” Ayey tidhi Hooyo Xaali
Muuse oo ku nool Xaafada Daami.
Ururka codka haweenka beelaha la hayb sooco ee VOSOMWO oo la aasaasay 2004.
Ururku muddada uu jiray wuxuu adeegyo horumarineed oo badan ayuu hore ugu
fidiyay bulshada uu u adeego, waxaannu khibrad iyo waayo-aragnimo dheer u
leeyahay kuna sameeyay daraasado cilmi ah dhibaatada tacadiyada xuquuqal-
insaanka, waayaha iyo duruufaha qallafsan ee ku xeeran nolosha dadka ka soo jeeda
beelaha afarta beelood ee Tumaalaha, Yibraha, Madhibaan iyo Muuse-dhariyo, ee ku
nool dalka jamhuuriyadda Somaliland.
“Haddaba, waxaan ka filaynaa golayaasha sharci-dejinta, xukumada iyo xisbiyada
qarankuba inay si buuxda u hirgalyaan nidaamka ama fikradaha samaynta nidaam
khaasah ama tiro kuraas ah oo cayiman (Quota), marnaba maaha faaiido ama asxaan
gaara oo loo fidinayo beelaha la hayb-sooco ama laga tirada badan yahay ee waa ku
milankooda dhabta ah inay helaan xuquuq la mida kuwa ay haystaan beelaha tirada
badan ee ay dalka wada wadaagaan. Caam ahaan, nidaamkaas khaaska ah ee (Quota)
ama kuraasta cayiman ee iyagoo keliya ku tartamayaan wuxuu wax ka tarayaa ku soo
milmidda beelaha la hayb-sooco ee bulshada inteeda kale, wuxuuna aayitiin fiican oo
mustaqbaleed siinayaa beelaha la hayb-sooco, markay ku dhex jiraan ama qayb ka
yihiin hawl-qabadyada qaran ee siyaasadeed iyo kuwo bulsheed”. Sidaasi waxa lagu
sheegay Warbixin ay soo Saareen Ururka VOSOMWO
Ugu dambeyntii, bulshadan ayaa ah mid boqollaal sanno la soo deristay takkoor iyo
faquuq ka dhan ah iyada, waxaana intooda badan ay ka dhaceen nolosha iyagoona
door muuqda ku lahayn bulshada ay la nool yihiin.
Ururka VOSOMWO wuxuu soo jeediyey “waxaan ka filaynaa golayaasha sharci-
dejinta , xukumada iyo xisbiyada qarankuba inay si buuxda u hirgalyaan nidaamka
ama fikradaha samaynta nidaam khaasah ama tiro kuraas ah oo cayiman (Quota),
marnaba maaha faaiido ama asxaan gaara oo loo fidinayo beelaha la hayb-sooco ama
laga tirada badan yahay ee waa ku milankooda dhabta ah inay helaan xuquuq la mida
kuwa ay haystaan beelaha tirada badan ee ay dalka wada wadaagaan. Caam ahaan,
nidaamkaas khaaska ah ee (Quota) ama kuraasta cayiman ee iyagoo keliya ku
tartamayaan wuxuu wax ka tarayaa ku soo milmidda beelaha la hayb-sooco ee
bulshada inteeda kale, wuxuuna aayitiin fiican oo mustaqbaleed siinayaa beelaha la
hayb-sooco, markay ku dhex jiraan ama qayb ka yihiin hawl-qabadyada qaran ee
siyaasadeed iyo kuwo bulsheed.
Waxay qaybtooda ka helayaan nidaamka xukuumadeed, waxayna awood u helayaan
inay wax ku biiriyaan sharci-samaynta, waxayna door weyn ka qaadayaan
horumarinta, dib u dhiska iyo maamulka dalka. Marka dib loo yara milicsado
doorashooyinkii dalka hore uga dhacay iyo halka ama raadka ay ku
reebtaydadyowgan la hayb sooco ama dhaqanka naafeeyay , taas oo bilaw u ah
halganka ama dadaalka ay bilaabeen beelaha la hayb sooco iyagoo ah muwaadiniin
asal ahaan ka soo jeedda dalka Somaliland in takoor iyo tiro yaraan ku waayeen
xuquuqdoodii dastuuriga ah ee ka qaybgalka siyaasadda iyo horumarka, talada dalka
taasina maaha waxa la aqbali karo ”.